YAAB! Cunsuriyad Lagula Kacay Carruurta Xiddigii Reer France Ee Djibril Cisse Oo Dunida Ka Yaabisay Iyo Liverpool Oo Fadeexad Dhax Fadhida - Cadalool.com
Maalintii Jimcihii waxa dunida qabsaday cunsuriyad lagula kacay laacibka Liverpool ee Mohamed Salah oo jamaahiirta Chelsea ay ku tilmaameen argagixisiyo iyo qarxiye, taas oo kusoo beegantay laba maalmood ka hor kulankooda ay Maanta isku haleelayaan Anfield labada kooxood.
Iyadoo warkaas hor jiro, ayaa waxa soo baxay mid kasii daran oo ah in carruurta uu dhalay laacibkii reer France ee Djibril Cisse lagu cunsuriyeeyey magaalada Liverpool xilligii uu laacibkaas hore u ciyaarayay naadiga reer Ingiriis.
Xaaskii hore ee Djibril Cisse ay kala tageen, ayaa daboolka ka qaaday tacaddiyo cunsuriyadeed oo ay dhibbane u noqdeen labadeeda wiil ee Cassius oo 13 jir ah iyo Prince oo 11 jir, kuwaas oo labadooduba ciyaara kubadda cagta, laakiin baraha bulshada lagu baahiyey cunsuriyad iyo takoor ka dhan ah.
Haweenaydan oo lagu magacaabo Jude Cisse waxay xustay in baraha bulshada loogu soo diro carruurteeda farriimo nacayb iyo cunsuriyad ah.
“Tacaddiga wiilashayda lagula kaco ma rumaysan kartid. Muxuu qof xanuunsanayaa u bartilmaameedsanayaa canug sidan oo kale ah? Waxay ku abuurtay inay ka fikiraan midabka jidhkooda oo ay dareemaan inay ka duwan yihiin.” Sidaas ayay tidhi Ms Cisse oo la hadlayeysay Sunday Mirror.
Hooyadan ubadkeeda la dhibaateeyaa waxay sheegtay in farriimaha takoorka ah ee baraha bulshada loogu soo dirayo carruurteeda iyo tacaddiyada kaleba ay yihiin wax aan la aqbali karayn.
Booliska Cheshire Police ayaa sheegay inay bilaabayaan baadhitaan taam ah si ay usoo helaan dadkii dhibaatada u geystay labadan carruurta ah.
Sabtidii shalay, waxa dhacday arrin kale oo Yuhuud-nacayb ah oo ay ku dhawaaqayeen qaar ka mid ah taageereyaasha West Ham intii ay socotay ciyaartii ay la yeesheen Manchester United, laakiin Hammers ayaa shaacisay inay bilaabayso baadhitaan arrintan la xidhiidha.
Sidaas oo kale, Liverpool iyo Chelsea ayaa war-saxaafadeedyo luuqad adag ku qornaa kasoo saaray cunsuriyaddii ay taageereyaasha Chelsea kula kaceen Mohamed Salah, halka xulka qaranka Montenegro ay waajahayaan ciqaab adag kaddib markii ay taageereyaasheedu cunsuriyad u geysteen Danny Rose xilli ay xulka qaranka England la ciyaarayeen kulan ka tirsanaa isreeb-reebka Euro 2020.